Agarsisoota Islaayidii Baratamoo
Agarsiisa Islaayidii - Agarsiisa Islaayidii Baratamoo filadhu
Agarsiisoota islaayidicha baratamoo jiran hunda tarreessa.
Agarsiisa islaayidii baratamoo uumuuf, Haaraa cuqaasi.
Agarsisaa Islaayidii Baratamoo Fayyadami
Agarsisaa islaayidii baratamoo yemmuu Eegali cuqaastuu filattee ademsiisa. Karaa birootiin, pirezenteeshiinin martii ni mula'ata.
Agarsiisa islaayidii bartamoo adeemsisuuf:
Agarsisicha tarriicha keessaa fili kana booda Agarsiisa Islaayidii Baratamoo fayyadamii cuqaasi.
Agarsiisa islaayidii baratamoo uumi.
Islaayidoota Ida'ii, haqi, yookiin deebisi sadarkeessi akkasumas maqicha islaayidii baratamoo filattee jijjiirii.
Garagalcha agarsiisa islaayidii uuma. Gulaalicuqaasuun maqicha agarsiisiicha fooyyeessuu dandeessa.
Agarsiisii islaayidiichaa adeemsisa. Yoo pirezenteshinii baratamoo adeemsisuu barbaadee Agarsiisii Islaayidii Baratamoo fayyadamuu akka filattee mirkaneessii.
Title is: Agarsisoota Islaayidii Baratamoo